Arsenal oo ka badisay Crystal Palace - BBC News Somali
Daqiiqado ka hor waxaa soo gabagabowday ciyaar xiis badneyd oo dhexmartay kooxaha Crystal Palace iyo Arsenal, oo ciyaartoodii ay ku soo gebagabowday 1-2 oo ay guushu ku raacday kooxda Arsenal.
Labada kooxoodba waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan oo weerar iyo weerar celis ah, waxaase ciyaarta ku wanaagsaneyd oo inta badan maamulaysay kooxda Arsenal.
Arsenal ayaa goolka ku hormartay oo weeraryahankooda Olivier Giroud ayaa daqiiqadii 16-aad u daahfuray goolka, balse 12 daqiiqo kaddib Crystal Palace ayaa barbaraysay oo Joel Ward ayaa banaan xariiqa goolka ka dhaliyay gool qurxoon.
Qeybtii horana 1-1 ayaa lagu kala nastay, markii qeybtii labaad ee ciyaarta la isugu soo laabtay ayaa dhowr weerrar oo ay Arsenal soo qaadday waxaa u suuragashay in ay markale qabato hoggaanka ciyaarta, markanse goolka Crystal Palace iyagaa iska dhaliyeen oo ciyaaryahankooda Damien Delaney ayaa iska dhaliyay.
Kooxda Crystal Palace ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay waxa ay iska cuneen fursado goolal loo fishay balse taasi natiijada ciyaarta waxba kama aanay badelin oo waxa ay ku dhammaatay 2-1 oo ay guushu ku raacday kooxda Arsenal.